Somaliland iyo Somaliyaba waxa ay guul ku gaadhi karaan maamul Suubban ( Good governers ). | Awdalpress.com
Somaliland iyo Somaliyaba waxa ay guul ku gaadhi karaan maamul Suubban ( Good governers ).
Waxa Daabacay staff-reporter on Apr 18th, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Marka la maqlo Somaliya amma Somaliland inkastoo ay dhinaca nabadda ku kala fog yihiin amma ku kala wanaagsan yihiin, haddana waxa caalamku u yaqaannaan dalal musuq maasuq iyo maamul xumo kdishootay ama ku caan baxay. Marba marka ka danbaysana waxa ka sii durkaya dalalka daneeya ama kuwa deeqaha siiya. Shacabka reer Somaliland amma Somaliyeedna waxa ay gacanta ugu jiraan maamulayaal tuug ah, danaystayaal ah iyo kooxo xoog ugu taliya. Awood ay shacabku isaga dhiciyaan iyo fursad ay xuquuqdooda ugu doodaanna weli may helin. Amma wakhtiga oo ka jiifa ayaan xilligan u saamixin in ay awooddooda muujiyaan.
Illaa iyo bur burkii dalka ka dhacay ee ay Somaliland la soo noqotay madaxbannaanideeda, waxa magaalada Hargeysa ka jiray maamullo is bed-beddelay, kuwaasi oo aanu midna qancin shacabka. Laakiin haddana dadku mar walba waxa ay qabeen amma qabaan in ay rajo iman doonto. Rajadii la sugayeyna waxa ay noqotay mid aan la gaadhayn ama wasiirro aan tayo iyo dadnimo lahayni ay gabneeyaan.
Dhinaca Somalia, weliba koonfurta iyada hadalkeedaba daa, waxana lala daalaa dhacayaa oo aan faro ku jirin bahashii la odhan jiray NABAD. Qarax iyo cabsi ayaana shacabka iyo maamulkoodaba u wehel ah.
Labada dhinac iyo guud ahaanba Somalida degta geeska Afrikana waxa sii ragaadiyey bahal qabyaalad la yidhaa, oo si arxan darra ah ay shacabku ula nool yihiin. Dhibta aan qabyaaladdaasi ka laad-laadin ee dadka fara xun ku haysaana waa daroogada QAADKA la yidhaa, ee uga timaadda Kenya iyo Ethopia. Daroogadaasi oo shacabka ku keentay dhaqan xumo, xanuunno, ma shaqaystanimo iyo dhaqaalihii dalka oo ku baaba’ay.
Si kastaba arrini ha ahaatee, waxa aan shaki ku jirin in shacabka Somaliyeed ee geeska Afrika degaa uu u baahan yahay maamulayaal waddaniyiin ah, oo u shaqeeya, balse aan ka shaqaysan. Maamulayaal aqoon iyo karti leh, oo dadka iyo dalkaba ka badbaadiya dhibahaasi aan ka soo sheekaynay.
Waxase nasiib darro ah in kolba ninka loogu yeedho Madaxweyne ee ku fadhiista kursiga ugu sarreeya dalalkaasi, in uu noqdo mid ilaashada kursigiisa, ka baqa kaabba-qabiillada, ku shaqeeya hayb qabiil iyo danaysi. Madaxweynaha noocaasi ahina wakhti u heli maayo in uu ka duulo danta dadka iyo horumarka dalka. Maalinta la magacaabo ayaana ugu danbaysa dadka uu beenta u sheegayey ee doortay.
Gaba gabadii, Somalia iyo Somalilandba waxa ay taagan yihiin marxalado u baahan in la badbaadiyo, oo haddii ay xaaladuhu sidaa ku sii socdaan aan rajo danbe jiri doonin.
This post has been viewed 3381 times.